मेलिना र निशानको स्वरमा बसन्त सापकोटाको गीत ‘हावा चल्यो’ – Khabar Silo
काठमाडौं। संगीतकार बसन्त सापकोटाको शब्द/संगीतमा नयाँ गीत सार्वजनिक गरिएको छ।शुक्रबार ‘हावा चल्यो’बोलको गीत युट्युबमा सार्वजनिक गरिएको हो। गीतमा मेलिना राई र निशान भट्टराईले आवाज दिएका छन्।
सुब्रतराज आचार्यको निर्देशन रहेको भिडियोमा वर्षा राउत र अर्जुन गौतम फिचर्ड छन्।प्रविन सिंहको कोरयोग्राफी, नवराज उप्रेतीको छायांकन रहेको भिडियोको सम्पादनको जिम्मेवारी विकाश ज्ञवालीले पूरा गरेका हुन्।
बलिउड चर्चित सुपरस्टार सलमान खानका धेरै साथीहरु छन् । यद्यपि उनी बलिउडकै केही कलाकारुहरुलाई भने मन पराउँदैनन् । एकपटक छुटेको सम्बन्ध उनी प्राय सुधार्ने गर्दैनन् ।उनी एकपटक साथी छुटिसकेको व्यक्तिसँग माफी माग्दा पनि माग्दैनन् माफी दिँदा पनि दिँदैनन् । उनले अहिलेसम्म बिहे गरेका छैन्न तर उनको प्रेमिका अर्कै अभिनेतासँग नजिकिए पछि उनले सम्बन्ध नै तोड्ने […]
फ्राइडे रिलिज : विराजको ‘साङ्लो’ भर्सेज विपिनको ‘सेल्फी किङ्ग’, कसले मर्ला बाजी ?
काठमाडौं, २४ माघ । शुक्रबार नेपाली वक्सअफिसमा निकै प्रतिक्षित मानिएको दुई नेपाली सिनेमा रिलिज भएका छन् । आज शुक्रबारबाट एक्सन अभिनेता विराज भट्टको निर्माण तथा डेब्यू निर्देशन ‘साङ्लो’ र विपिन कार्की स्टारर ‘सेल्फी किङ्ग’ रिलिज भएका हुन् । विराजको ‘साङ्लो’ एक्सन ड्रामा सिनेमा हो भने विपिनको ‘सेल्फी किङ्ग’ ड्रामा श्रेणीको सिनेमा हो । सेल्फी किङ्ग’लाई […]
महानायक बच्चनलाई के भएको हो ? उनीसँग ४० वर्षदेखि काम गर्दै आएका व्यक्तिले गरे यस्तो खुलासा